मेयर जिसीले स्काभेटर चलाउँदा ५ जना घाइते
२०७५ असार १ गते १६:४४
पोखरा, असार १ । पोखराको फिर्के खोलामा पैदल मार्ग उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले एक्कासी डोजर चल्दा पत्रकारसहित ५ जना घाइते भएका छन् । कार्यक्रममा अचानक डोजर चलेर फिर्केको रेलिङलाई धक्का दिँदा पत्रकार सन्देश श्रेष्ठ, पत्रकार रञ्जन अधिकारीलगायत ५ जना...
पृथ्वी राजमार्गमा माइक्रोबस र ट्रक एकापसमा जुध्दा ४ जनाको मृत्यु , ८ जना घाइते
२०७५ असार १ गते १६:३५
काठमाडौं १,असार । इच्छाकामना गाउँपालिका–३ चुर्लिङटारको पानीधारास्थित पृथ्वी राजमार्गमा आज बिहान माइक्रोबस र ट्रक एकापसमा जुध्दा ४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले दिएको जानकारीअनुसार पोखराबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ७६९२ नंको माइक्रोबस...
२०७५ असार १ गते १२:४३
वल्थली, कार्भे, १ असार । प्राकृतिक विपद्को हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा रहे पनि त्यसबाट बच्न पूर्वतयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा निकै कमजोर रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । गृह मन्त्रालय र एशियाली विपद् तयारी केन्द्र (एडिपिसी) द्वारा सञ्चारकर्मीहरुका लागि यहाँ आयोजित विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनदिने प्रशिक्षणका...
शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण र उत्तर कोरियाबीच सैनिकस्तरमा वार्ता सुरु
२०७५ असार १ गते ०:१८
सोल, १ असार । दक्षिण र उत्तर कोरियाबीच सीमा क्षेत्रमा पर्ने गाउँ पानमुन्जोममा बिहीबार दुवै देशका सैनिक जर्नेल स्तरमा वार्ता सुरु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यामहरुले बिहीबार सो जानकारी दिएका छन् । बिहीबार बिहानबाट उक्त वार्ता सुरु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय...
२०७५ जेठ ३१ गते २३:४४
काठमाडौँ, ३१ जेठ । दक्षिण एशिया र युरोपेली मुलुकका प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ताले नेपालको संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन पद्धति नवीनतम् रहेको बताउनुभएको छ । नर्वेजियन प्रतिलिपि अधिकार विकास संगठनले आयोजना गरेको १० दिने ‘प्रथम एशियास्तरीय प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण’ सम्बन्धी कार्यक्रमको आज यहाँ समापन समारोहमा उहाँहरुले नेपालले...
२०७५ जेठ ३१ गते २२:५६
काठमाडौं, ३१ जेठ । विश्वकप फुटबलको पहिलो खेलअघिसम्म फिफा बरियतालाई आधार मान्ने हो भने रसिया प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कमजोर टोली रहेको थियो । यसअघिका आधा दर्जन खेलभन्दा बढी जीतविहीन रहेको थियो । जसले गर्दा टोली निरन्तर आलोचनाका कारण दबाबमा थियो । तर, आयोजक राष्ट्रले तथ्याङ्क...
फेरी ललितपुर रोडमा हंगामा मच्चाउदै हिडेपछि पूर्वयुवराज पारस प्रहरीको फन्दामा !
२०७५ जेठ ३१ गते १७:३६
काठमाडौँ, जेठ ३१ । गएको सोमबार ललितपुरको जावलाखेल भएर एउटा गाडी तिब्र गतिमा दौडियो। ललितपुर ट्राफिक प्रहरीले रिङरोड भित्र तिब्र गतिमा सवारी चलाउन प्रतिबन्ध नै गरेको छ। कसैले तिब्र गतिमा सवारी चलाए कडा कारबाही हुने ललितपुर ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सीताराम हाथेछुले बताए। जवालाखेल चोकमा...
बलात्कार अभियोगमा गुन्डा नाइके ‘स्याल’ पक्राउ
२०७५ जेठ ३१ गते १७:०५
काठमाडौँ, जेठ ३१ । आफूलाई गुन्डाका रुपमा स्थापित गुण्डा नाइके संजीव लामा ‘स्याल’लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्याललाई बलात्कार मुद्दामा महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले पक्राउ गरेको हो । उडल्याण्ड कम्प्लेक्समा नोला लाउञ्ज एण्ड बार चलाउँदै आएका लामाले आफ्नै रेस्टुरेन्टमा कार्यरत युवतीलाई पटक पटक...
प्रवेशिका परीक्षा एसईईको नतिजा आउँदै, करिब ५ लाख परिक्षर्थीको अवस्था के होला ?
२०७५ जेठ ३१ गते १६:५७
काठमाडौँ, जेठ ३१ । प्रवेशिका परीक्षा एसईईको नतिजा अर्को हप्ता प्रकाशित हुने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीका अनुसार अबको केही दिनमा नै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीका अनुसार हालसम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सकिएको र अब अन्तिम...
अब नेपालमा कांग्रेस आबश्यकता छैन : अध्यक्ष प्रचण्ड
२०७५ जेठ ३१ गते १६:४५
काठमाडौँ, जेठ ३१ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बदमाशी गरेको पाइए आफ्नै घरबेटीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले मंगलबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने, ‘यहाँ मेरो वा कसैको घरबेटी भन्ने चर्चा गर्नु आववश्यक नै छैन...
« अघिल्ला 1 … 306 307 308 309 310 … 357 पछिल्ला »